भैरवीलाई प्रदीपको बाईबाई ? - मनोरञ्जन - नेपाल
लिलीबिली ताका नै प्रदीप खड्का भैरवीमा अनुबन्ध भएका थिए । पहिलो किस्तास्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ पनि लिएका थिए । तर लिलीबिली मात्र होइन, त्यसपछि रोज पनि प्रदर्शन भइसक्यो । लभ स्टेसन आउँदैछ तर भैरवीको खोजखबर छैन । एकातिर, भैरवी बन्न/नबन्ने टुंगै छैन । अर्कातिर, बन्यो भने पनि प्रदीपले खेल्ने समय छैन । कारण, उनी अरु दुई फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका छन् । अनमोल केसीलाई स्टार बनाएका हेमराज बिसीले आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टमा प्रदीपलाई रोजेका हुन् । यसपछि प्रदीपले रामबाबु गुरुङसँग काम गर्ने निश्चित भएको छ । यसबीच प्रेमगीत ३ पनि भ्याउनु पर्ने बाध्यता छ उनलाई । अनि, भैरवीलाई समय कहिले त ? सहमति गरेको समयमा सुटिङ नगरेपछि प्रदीप भैरवीबाट बिच्किएको बताइन्छ । तर निर्देशक दिनेश राउतचाहिँ अझ प्रदीपले खेल्नेमा आशावादी छन् ।